Soomaali ku go’doonsan Jaziirad u dhexeysa Spain iyo Maroco
Spain:-Dad Soomaali ah ayaa waxay ku go’doonsan yihiin Jaziirad u dhexeysa Spain iyo Maroco Dadkan Soomaalida ah oo u badan dhalinyaro, ayaa waxay ujeeddadoodu aheyd inay Spian uga sii gudbaan qaaradda Yurub, iyagoona soo maray dalka Maroco, markoodii horena meelo kala duwan ka kala yimid.
Xero ku taala Jaziirad Spian iyo Maroco u dhexeysa ayaa dadkan lagu xareeyey, walow ay haystaan cuno iyo meel ay seexdaan, haddana waxaa sii yaraaneysa rajadii ay qabeen markii ay marinkan isku soo biimeynayeen.
Dadkan Soomaalida ah ee tahriibayey, ayaa tiradooda lagu qiyaasayaa ilaa 30 qof, waxaana jira African kale oo halkaas kula sugan, iyadoona in halkaas ay gaaraan ay uga baxday qofkiiba dhowr kun oo Doolar, waa dadka ka tagay bariga Africa.
Inta badan dhalinyaradu waa ogyihiin dhibaatooyinka ka horeeya, balse indhaha ayey ka qarsadaan xaqiiqada jirta, iyagoo khatar ay ogyihiin u bareera.
Dhibaatooyinka ay dhalinyaradu la yaacayaan ayaa waxaa ugu wacan xasilooni la’aanta ka jirta waddankoodii hooyo, iyadoo sidoo kale noloshu ay ku xumaatay, balse marna isuma dhigmaan dhibaatada ay ka cararayaan iyo midda uga horeysa halka ay ku socdaan iyo safarka ay u marayaan